भरतपुर महानगरपालिकामा झण्डै एक तिहाइ मतगणना हुँदा गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालले अग्रता फराकिलो बनाएकी छन्।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार अगाडि छन्।
ललितपुर महानगरको मेयरमा कांग्रेसका महर्जन र उपमेयरमा एमालेकी शाक्यको अग्रता ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) की मञ्जली शाक्यको अग्रता कायम छ।
सीके राउतको गाउँपालिकामा लोसपा विजयी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
भरतपुरमा रेणु दुई हजार मतले अगाडि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार रेणु दाहालले दुई हजार मतको अग्रता कायम गरेकी छन्।
सेना परिचालनपछि धरानमा मतगणना शुरू धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आन्दोलन जारी रहे पनि कडा सुरक्षाबीच मतगणना शुरू भएको छ।
मेयरका उम्मेदवारमाथि कुटपिट गरिएको तनहुँको व्यास नगरपालिका-८ रिस्तीस्थित मतदान केन्द्रमा आज पुन: मतदान भइरहेको छ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
रसुवामा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बदर मत सङ्ख्या घटेको छ।
देवी ज्ञवाली भन्छन्- भुइँकटहरले पाएकाे भोट एमालेलाई आउने थिएन कतिपयले एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई जाने कांग्रेसका असन्तुष्ट भोट जगन्नाथ पौडेलको भुइँकटहरमा गएको टिप्पणी गरिरहेका वेला अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका देवी ज्ञवाली भन्छन्, “भुइँकटहरले पाएको भोट कांग्रेसकै हो, त्यो भोट एमालेमा आउने थिएन।”
तमलोपाले खाता खोल्यो महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उम्मेदवार दिलीपकुमार पाण्डेय विजयी भएका छन्।
एउटाको मतले अर्कै उम्मेदवार विजयी ! खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–२ मा एक उम्मेदवारको मतले अर्कै उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
मन्त्रीका छोरा मेयरमा पराजित सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको मेयरमा जनमत पार्टीका वीरेन्द्र माझी निर्वाचित भएका छन्।
धरान उपमहानगरमा पनि ‘लौरो’ले लियो अग्रता धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्।
सिके राउतको पार्टीले खाता खोल्यो सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनीको मेयर जितेको छ।
मोरङमा तीन पालिकाको गणना सकियो; दुईमा एमाले, एकमा कांग्रेस विजयी मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये तीन वटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये दुई स्थानीय तहमा नेकपा (एमाले) र एउटामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएका छन्।
भरतपुरमा २७ हजार मत गणना, कसको कति? भरतपुर महानगरपालिकामा बुधबार बिहानसम्म २७ हजार २६ मत गणना भएको छ।
यी हुन् ३४५ स्थानीय तहमा निर्वाचित उम्मेदवार स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत देशभरका ३४५ स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ।